शरीरलाई कति पानी चाहिन्छ, कसरी पिउने ? – Lokpati.com
चितवन नेकपा अपराध राशिफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली मृत्यु सरकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड पक्राउ अमेरिका नेपाली काँग्रेस प्रचण्ड
शरीरलाई कति पानी चाहिन्छ, कसरी पिउने ?
काठमाडौं। एक स्वस्थ मानिसले दैनिक कति पानी पिउनु पर्दछ ? सामान्य त स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रतिदिन २.५ लिटर पानी छिर्छ र त्यति नै पानी बाहिर निस्कने गर्दछ भन्ने मान्यता छ। खाएर होस् या भित्र नै बनेर होस्।
मानिसले दैनिक १.२ लिटर पानी खान्छ। थप एक लिटर सोलिट फुडबाट शरीरमा जान्छ। त्यो भनेको हामीले खाने दाल, भात, तरकारी आदिबाट। पानी र सोलिड फुडबाट गरी शरीरमा २.२ लिटर भयो। अब बाँकी ३०० एमएल पानी अक्सिटेसन रिडक्सन (पानी बन्ने प्रक्रिया भन्दा अघिल्लो अवस्था) बाट निस्कन्छ छ।
शरीरबाट कति पानी बाहिरिन्छ ?
पिसाबबाट एक दिनमा १.५ लिटर पानी बाहिरिन्छ। इन्सेन्सीवल लस (पसिना, श्वासप्रश्वास प्रक्रिया) मा ८०० एमएल र दिसाबाट २०० एमएल गरी २.५ लिटर नै पानी निस्कन्छ। यो सामान्य अवस्थाको हिसाव हो। अब तपाई गर्मी ठाउँमा बस्नुभएको छ भने धेरै पसिना निस्कन्छ। त्यसबेला पानी चाहिन्छ।
पानी पर्याप्त भएन भने तपाईलाई डिहाइड्रेसन हुन्छ। पानी कम पिसाव कम्ती आउँछ। जाडोका बेला नशा खुम्चिन्छ। धेरै पानीको धेरै खर्च हुँदैन। भनेपछि जाडोमा पानी खाँदा धेरै पिसाव लाग्छ। किनभने त्यसबेला इन्सेन्सेवल लस कम भयो। एउटा साधारण स्वस्थ मानिसले पानी धेरै खाएर हानी हुँदेन। तर कम खाएर डिहाइड्रेसन हुने भयो।
पिसावको रङ हेरेर पनि थाहा हुन्छ शरीरका लागि पानीको आवश्यकता छ कि छैन भनेर। सामान्य त मानिसको पिसावको रङ स्ट्र कलर (परालको जस्तो) पुरै पहेलो पनि होइन, रत्याइदो पनि होइन रङको हुन्छ। अब के बुझ्नु पर्‍याे भने पिसाव सङ्लो हुँदासम्म पानी खानुपर्छ।
त्यसैले पानी कति खाने भन्ने सन्दर्भमा तपाईको पिसाव सङ्लो हुनुपर्‍यो। शरीरमा आराम अनुभव हुनुपर्‍यो। मुख र शरीर सुख्खा हुनु भएन। तर, रोग लागेको अवस्था, जस्तै मिर्गौलाले राम्ररी पानी फाल्न नसकेको अवस्था, जीउ सुन्निएको अवस्थामा पानी कम खानु पर्दछ।
जब हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ, तब शरीरले पानी कम हुनुको लक्षण देखाउन थाल्छ। यस्ता लक्षण देखिएपछि हामीले शरीरमा पानीको आवश्यक मात्रा पूर्ति गर्न दैनिक पर्याप्त पानी पिउन जरुरी छ। हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ पानी धेरै मात्रामा पिउनुपर्छ। तर, हामीलाई थाहा हुँदाहुदै पनि हामी पर्याप्त मात्रामा पानी पिउदैनौँ। यसको परिणाम हामी आफ्नो शरीरमा विभिन्न परिवर्तन आइरहेको अनुभव गर्न थाल्छौं।
पानी नपुगेको कसरी थाहा पाउने ?
शरीरको वजन बढ्नु – शरीरको वजन बढ्दै जानाले तपाईंले पर्याप्त मात्रामा पानी पिइरहनु भएको छैन भन्ने जनाउँछ। विभिन्न अध्ययनले दिनमा कम्तीमा पनि ५ सय मिलिलिटर (आधा लिटर) पानी खाँदा पनि यसले पाचन क्रिया ३० प्रतिशत बढाउने देखाएका छन्। र, यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। त्यसैले अधिकांश स्वास्थ्य तथा पोषणविदहरूले शरीरको उपयुक्त वजन बढ्न नदिन वा वजन घटाउन पानीको मात्रा बढाउने सल्लाह दिन्छन्।
यतिमात्र होइन उनीहरू शरीरमा पानीको अलिकति पनि कमी हुनासाथ मस्तिष्कमा मिश्रित संकेत पुग्ने र हामीले भोक लागेको अनुभव गर्छौं, जबकि हामीलाई खानेकुराको नभएर पानी चाहिएको हुन्छ भन्छन्। तपाईंले भोजन गर्नुअघि एक/दुई ग्लास पानी खानु भयो भने यसले तपाईंको भोजनको मात्रा घटाउँछ, अर्थात तपाईं धेरै खान सक्नुहुन्न।
अपचको समस्या समाधान – तपाईंलाई शौचालयमा पेट खाली गर्न धेरै समय लागिरहेको छ भने तपाईंले पानीको मात्रा बढाउन आवश्यक छ। शरीरमा पचिसकेको खानेकुरा पेटबाट बाहिर निकाल्न तरल पदार्थको आवश्यकता पर्छ। दीर्घ कब्जियत/अपचको कारण नै पानीको कमी हो। पाचन क्रिया सहज बनाउन र कब्जियत/अपचको समस्या आउन नदिन पर्याप्त पानी पिउनु पर्छ। पानीको मात्रा बढाउनासाथ तपाईं आफैं कब्जियत कम हुँदै गएको अनुभव गर्न सक्नु हुन्छ। पानी पिउँदा पनि कब्जियत कम भएन भने चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
मुत्रनलीको संक्रमण – मुत्रनलीको संक्रमण अत्यधिक कष्टदायक हुन्छ। युटिआई (युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन) विभिन्न कारणले हुने भए पनि प्रायः हाम्रो शरीरमा सहवास वा यौनांग र मलद्वारको राम्ररी सफाइ नगर्दा ब्याक्टेरिया प्रवेश गरेपछि हुने गर्छ।
मुत्रनलीमा संक्रमण हुने अर्को मुख्य कारण पानीको कमी हो। पर्याप्त पानी पिउनाले मुत्रथैलीबाट ब्याक्टेरिया पानीले बगाएर बाहिर निकाल्छ र ब्याक्टेरिया मुत्रथैलीमा फैलन पाउँदैन। शरीरमा पानीको कमी हुनुको लक्षण पिसाबको रंग गाढा हुनु वा पिसाब कम लाग्नु वा पिसाब पोल्नु पनि हो। यस्तो लक्षण देखिनासाथ पानीको मात्रा बढाउनुहोस् र यसपछि पनि यी लक्षण कम नभए चिकित्सकसँग परामर्श लिनु जानुपर्छ।
झर्किने र झन्किने – तपाईं जतिबेला पनि झर्किन र कसैले केही बोल्नासाथ झनक्क झन्किन थाल्नुभयो भने पनि शरीरमा पानीको कमी भयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला यस्तो बेला तपाईंलाई अरु केही होइन, एक गिलास पानीको आवश्यकता छ।
केही अध्ययनले सामान्य डिहाइड्रेसनले पनि स्नायविक÷मानसिक परिवर्तन हुने र त्यसको प्रभाव हाम्रो मानसिक क्षमता र एकाग्रतामा पर्नुका साथै झर्किने र झनक्क रिसाइहाल्ने जस्ता परिवर्तन हुने देखाएका छन्। हाम्रो शरीरमा आवश्यक पानीको मात्राभन्दा १ प्रतिशत मात्र पानीको कमी हुँदा समेत यस्ता नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
मांसपेशी बाउँडिने – मांसपेशी एकै ठाउँमा डल्लो पर्नु वा खास गरी पिंडुला बाउँडिनु कष्टदायक हुनुका साथै लाजमर्दो हुन्छ। यस्तो बेला अधिकांश व्यक्ति शरीर तन्काउने वा मालिस गर्ने गर्छन्। तर यसको उपचार अत्यन्त सरल छ, पानी पिउनु। किनभने शरीरमा पानीको कमी भएपछि नै मांसपेशी बाउँडिने गर्छ।
विभिन्न अध्ययनले पानीको कमी (डिहाइड्रेसन) र मांसपेशी बाउँडिनुबीच सम्बन्ध देखाएका छन्। हामीले थोरै पानी खाँदा रक्त सञ्चार नै मन्द हुन्छ। डिहाइड्रेसन भएपछि मस्तिष्कले महत्वपूर्ण अंग बचाउन शरीरमा भएको तरल पदार्थ/पानी मांसपेशीबाट त्यता पठाउँछ र मांसपेशी बाउँडिन्छ। पानीको कमीले शरीरमा हुनुपर्ने सोडियम र पोटासियमको मात्रा तलमाथि हुन थाले स्थिति अझ बिग्रन्छ। त्यसैले पर्याप्त पानी खान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, खासगरी गर्मीमा र व्यायामका बेला।
छाला सुख्खा हुनु, लोसनले पनि काम नगर्नु – जाडो मौसममा छाला सुख्खा हुनु सामान्य हो। तर, यसबाहेक अरु बेला मोस्चराइर लगाइरहँदा पनि तपाईंको छाला सुख्खा हुन्छ र फुट्छ भने पानीको कमी भएर हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा पानी पिउनुपर्छ। पानीको कमी भएपछि छालाले स्वाभाविक चमक/सौन्दर्य गुमाउँछ, त्यसबेला छालालाई सबैभन्दा बढी पानी नै चाहिन्छ।
मुख सुक्नु र धेरै तिर्खा लाग्नु – शरीरमा पानी कम भएको अर्को लक्षण हो, मुख तथा जिब्रो सुख्खा हुनु र टाँसिनु। साथै यसको अर्को लक्षण धेरै तिर्खा लाग्नु। दुवै अवस्थामा शरीरमा पानीको कमी पूरा गर्न पानी पिइहाल्नु पर्छ। यो लक्षण उल्लेख गर्नु किन पनि आवश्यक छ भने मुख सुक्नु र धेरै तिर्खा लाग्नु अर्को कुनै गम्भीर रोगको लक्षण पनि हुनसक्छ। केही दिन पर्याप्त पानी पिउँदा पनि यी लक्षण कायम रहे चिकित्सकसँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ।
टाउको दुख्नु – शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनुको अर्को लक्षण टाउको दुख्नु हो। चड्किएर दुखेको टाउको मिनेटैपिच्छे फुट्ला जस्तो गरी बढ्छ भने पानीको कमी भएको बुझ्नुपर्छ। यस्तो बेला एकाग्र हुन नसक्ने र धैर्य गुम्दै जाने हुन्छ। पर्याप्त पानी पिएपछि भने यी समस्या हट्ने गर्छ।
नेशनल हेडेक फाउन्डेशन (एनएचएफ) का अनुसार टाउको दुखाइ कुनै व्यक्तिको शरीरमा पानीको मात्रा कम भइरहेको सामान्य लक्षण हो। साँच्चै भन्ने हो भने शरीरमा पानीको कमीले माइग्रेन निम्त्याउँछ। एनएचएफको सुझाव छ– टाउको दुखेका बेला पानीमात्र खाने र गुलिया वा नुनिला खानेकुरा नखाने। किनभने यी खानेकुराले पानीको कमी अझ बढाउँछन्।
सधैं थकित – दैनिक रुपमा नियमित र पर्याप्त निद्रा सुनिश्चित गर्नुहोस्। सधैं नियमित रुपमा पर्याप्त सुते पनि तपाईं जतिबेला पनि थकित वा अल्छी महसुस गर्नु हुन्छ भने शरीरमा पानीको कमी हुनसक्छ। थकाइले तपाईंका चेतना र एकाग्रतामा असर पार्न सक्छ। थकाइले शरीर आलस्य र असावधान बनाउने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्छ। तर, दिनभर बढी मात्रामा पानी पिएर यस्तो अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ।
गोरखा जिल्ला : एक संक्षिप्त परिचय
कोरोनाका नयाँ तथ्य फेला, यस्ता छन् १० लक्षण
कसरी बढ्छ युरिक एसिड, जोर्नी किन दुख्छ ?
काेराेना सम्बन्धी केही मिथक केही सत्य
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आठ खानेकुरा